Mitahiry hotely izahay ~ Journey-Assist - Ahoana ny fisafidianana ny hotely mety
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Mitahiry hotely izahay
Mitahiry hotely izahay
Rehefa mifidy hotely dia tsy mijery ihany sary efitra. Na dia tsara tarehy aza ireo sary dia tokony mbola mandinika ihany ianao faritra misy efitranonaseho tamin'ny isa.
Tokony ho azonao fa ny fitaovana fakana sary dia afaka manamboatra tranobeny amin'ny kabinetra, fa tsy hamitaka ny isa.
Ny sokajy ny trano fandraisam-bahiny, ny stardom, na izany aza, ny vidiny, dia tsy ny tondro fatra indrindra. Avy amin'ny trano fandraisam-bahiny mankany amin'ny hotely fitsipi-pitondran-tena mety miovaova.
Ary koa, ny haavon'ny efitra fiononana amin'ny trano fandraisam-bahiny samihafa azo antsoina hoe hafa (deluxe, deluxe, standard, sns). Mendrika ny mijery ny zavatra rehetra karazana karazany trano fandraisam-bahiny sy izay atolony.
Miomàna hiatrika ny zava-misy fa ny karatra mety hanananao manakana vola iray (ohatra, vola mitovy amin'ny fandoavam-bola na iray andro), ho antoka tsy handavanao ny isa. Vakio tsara ny zava-drehetra momba ny trano fandraisam-bahiny sy ny famandrihana trano. Tsy ho voasoratra eo. Ary koa ny fotoana mety ekena hanafoana ny isa maimaim-poana.
Azafady azafady mba hahitana Wi-Fi, fiantsenana, sakafo maraina. Ny tafiditra ary ny tsy ampidirina amin'ny vidiny. Izany rehetra izany dia mety hampitombo ny vidim-piainana raha ampitahaina amin'ny tarehimarika teo aloha.
Mieritrereta izay tena ilainao ao amin'ny efitrano. Ohatra, mitovy TV tsy ilaina mihitsy na dia tsy mikasa ny handany fotoana be ao anaty efitrano aza ianao. Indraindray manao tsinontsinona fanamory rivotra mankasitraka mpankafy valin-drihana. Izy io dia hamonjy, ary miaraka amin'izay dia hamonjy ny fahasalamana.
Ahoana ny fomba hanamboarana kitapo
Kitapo fanampiana voalohany, fahadiovana
Mahazo mandritra ny dia izahay